Ụbọchị My Pet » Olee Otú M Pụrụ Zere Kparịtara Nwụrụ Anwụ Mpaghara na-na Site Hapụrụ?
site Ma Baritchi
“M na Nọgidesiri agbalị na-amalite mkparịta ụka. Nnọọ jụụ mere m crazy. The ice na-emebi na m na-ekwu na-emekarị na-agwụ elu ịbụ ihe n'ezie nzuzu.” – Ncheta
The n'Eziokwu Azịza
Anyị na-niile e tupu – na dara jụụ na-adị mgbe gị na dị nnọọ zutere onye na enweghị echiche ihe na-ekwu…
Dị nnọọ nke a na-n'uche gị… Ị na dị nnọọ zutere onye ọhụrụ na ị a obere ejighị n'aka ihe na-ekwu na-eme ka a ọma mbụ echiche. Ma eleghị anya, ị na-a obere na-eme ihere na otutu ụjọ! Ma eleghị anya, ị na-dị nnọọ ike ọgwụgwụ site na a ogologo ụbọchị n'ụlọ ọrụ. N'agbanyeghị, na ị na-kpamkpam rapaara na ike na-eche nke a otu nwere ọgụgụ isi ihe na-ekwu. Iji mee ka ihe ka njọ, gị ụbọchị na-adịghị ekwu ihe ọ bụla ma.
Ọ bụ “Mbụ ụbọchị NWỤRỤ ANWỤ Mpaghara!” – Enyemaka! Onye kwuo ihe… ihe ọ bụla… Ndenye!
Bụ gị faksị igwe ọzọ ikpoputa na ị?
Emela, gị faksị igwe nanị nwere ike protocol maka mbụ ụbọchị. Chegodị echiche banyere ikpeazụ ị faxed a akwụkwọ na mmadụ. Gị faksị igwe na-eme ka a na njikọ aka nke ọzọ faksị igwe, na mgbe ahụ ị na-anụ ụdị nile nke gibberish tupu akwụkwọ amalite na-aga site.
Ọ dịtụla mgbe i na-eche ihe na nke ahụ bụ ihe niile banyere? Ọfọn, abụọ ígwè ozi fax na-ihu ọma si hello na mwube ụda nke mkparịta ụka, otú ngwa ngwa na ha na-aga ikwu, bụ asụsụ ha na-aga na-eji, na ole ha na-aga ikori. Ọ bụ nnọọ yiri ndị mbụ nkeji ole na ole na gị ụbọchị.
Ị na-na-amata a ohuru onye
Ị na-na-eji okwu ọnụ ha nakawa etu esi na mmegharị ahụ
Ị na-figuring si ha nke ịkpa ọchị (nke nwere ike na nke ya onwe-agbanwe ụda olu nke mkparịta ụka kpamkpam)
Ị na-agbalị iji chọpụta ha ihe n'obi. Ọ bụ na ha n'ezie na-friendly? Ị nwere ike ịtụkwasị ha obi? Unu ndị pụtara unu ihe ọ bụla nsogbu?
Ị n'ezie, n'ezie na-amasị ha?
Ị nanị mkpa ime eme gị onwe mbụ ụbọchị protocol.
Ọ dị mkpa ka icheta na ihe e kwuru n'oge ndị mbụ nkeji ole na ole ikpe adịchaghị ihe. Ihe dị mkpa bụ igosi na mbụ, enyi na enyi njikọ dị onye ọzọ.
Lee ụfọdụ nkwurịta okwu 101 Atụmatụ maka ibido na ụkwụ aka nri.
-Abụ enyi na enyi na ezi mma
-Egosi nchegbu maka mmetụta onye ahụ echiche
N'ezie ige ha – anya ha n'anya (M maara na nke ahụ bụ a siri ike onye ma i nwere ike ime ya.)
Nke ahụ mara mma, ma ihe na-eme m asị? Ọ bụ n'ebe a mkpọ ice na-emebi ọ bụla oge?
abụghị kpọmkwem, ma e nwere bụ mgbe ihe i nwere ike ikwu iji belata dara jụụ.
Ndị a echiche kwesịrị ịrụ ọrụ kasị mbụ ụbọchị ọnọdụ.
Ajụ banyere ụbọchị ha… Kedu ka ọ dị?
Ajụ banyere ọrụ ha… Gịnị ka ha na-eme? Olee otú ha na-amasị ya?
Ịjụ banyere anu ulo na ụmụ. Ole? aha? Ages?
Eme ha ihe ọ bụla masịrị ha ime mgbe ha na-agaghị na-arụ ọrụ? n'ihe omume ntụrụndụ? Egwuregwu? wdg.
Amaara m na ndị a ụda kama ọnyà, ma echiche n'azụ ndị a dị mfe ajụjụ bụ ịchọta ihe ị ma na-enwe na-esiri banyere. Olileanya, ị ga-ahụ ihe ụfọdụ ị nọ nkịtị.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa inwe ihe kwa onye kwa ngwa ngwa . Gosi mmasị, ma na-arịọ n'ihu probing ajụjụ, ma unu adịghị adị oke intrusive. Ị na-achọghị mmenyenjo onye nke ọzọ anya.
Ya mere, gịnị ka anyị na ifriizi elu na nke mbụ ụbọchị? Ọtụtụ ikpe, na-ata agbachi nkịtị (nke nwere ike mgbe mgbe ka egwu n'ihi na ụfọdụ), dabeere egwu. Ee, egwu…
Egwu na ị ga-ekwu ihe n'ezie nzuzu
Egwu na ị ga-enwe ihe ọ bụla jikọrọ
-Atụ egwu na onye nke ọzọ agaghị amasị gị
Egwu nke ịbụ na-etinye na ntụpọ ịrụ
Olee otú i merie unu egwu?
Ọ bụ ezie na ọ dịghị anwansi usoro na ga-azọpụta gị oge ọ bụla, e nwere ihe ngwọta na-nsogbu gị. Were obere oge tupu gị ụbọchị na-abịa na a ole na ole dị mfe ma n'ozuzu ajụjụ na i nwere ike ịjụ ma ọ bụ Ekele na unu nwere ike ime ka. Dee ha ala na otu mpempe akwụkwọ. Na-mpempe akwụkwọ na gị obere akpa ma ọ bụ obere akpa. Ị-adịchaghị mkpa ka anya ya – na naanị ya na ị na ebe ọ maara na ọ na-ahụ ka a ga enyere gị aka icheta.
Ọ bụrụ na ị na-n'ezie rapaara, ewela onwe gị ụlọ mposi na anya gị na-eji Aghọ Aghụghọ Ule mpempe akwụkwọ. Mgbe ị laghachiri, ị ga-mmasị gị ụbọchị gị na-eche echiche ma na-elekọta ajụjụ.